‘लाल मोहन जि’ मा विपिन कार्की : RajdhaniDaily.com -
Home कला ‘लाल मोहन जि’ मा विपिन कार्की
‘लाल मोहन जि’ मा विपिन कार्की
काठमाडौंँ । फिल्म ‘लाल मोहन जि’ निर्माण हुने भएको छ । दुई बर्ष अगाडिको चर्चित फिल्म ‘पासवर्ड’का निर्देशक सम्राट बस्नेतले यसलाई निर्देशन गर्न लागेका हुन् । द्धन्द निर्देशक सम्राटको ‘पासवर्ड’ निर्देशनमा डेब्यु फिल्म थियो ।
आर.रोसफि फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको ‘लाल मोहन जि’का प्रस्तुतकर्ता तथा निर्माता सुगन तण्डुकार हुन् ।
विपिन कार्की, अर्पण थापा, कर्मा शाक्य, रोहित रुम्बा, रविन्द्र झा, सुस्मा कार्की, सुभाष मेचे, कालु राना, सुगन तण्डुकार र बालकलाकार सुशान्त मेचेको मुख्य भुमिका रहने फिल्मका लागि एक नायिका भने चयन हुन बाँकी छ ।
प्रवेश पौडेलको कथामा पट्टथा सम्वाद आकाश बरालले तयार पारेको फिल्ममा सन्तोष राजको संगीत, निरज कडेलको छायाँकन, राजु तामाङको द्धन्द्ध कबिराज गहतराजको नृत्य रहनेछ । फिल्मलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गर्नेछन् ।
झापाको भद्रपुर, भारत, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा छायाँकन हुने बताइएको फिल्म जेठको पहिलो साताबाट फ्लोरमा निस्कने तयारीमा छ ।
सस्पेन्स कमेडी कथामा बन्न लागेको फिल्मको कथा राम्रो भएको निर्देशक बस्नेतले दाबी गरे । ‘फिल्मको कथाका लागि दुई बर्ष होमर्वक गरेका छौ । यसको कथा अहिले सम्मकै उत्कृष्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ’ बस्नेतले भने ‘कथा राम्रो भएकोले पनि बिपिनलगायत कलाकारले मनपराएका छन् ।’ आफ्नो टिमको सबै कलाकारलाई समेत फिल्मको कथा राम्रो लागेको बस्नेतले सुनाए । फिल्म तिहारमा रिलिज लक्ष्य लिइएको फिल्मको प्रोडक्सन म्यानेजर दीपिल पन्त रहेका छन् ।
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका ३ पोर्ताहाका ४५ वर्षिय सत्यनारायण मंडल मंगलबार बिहानै साइलकमा श्रीमती सुनितालाई बोकेर बरमझिया गाउँतिर लागे । लकडाउनको समय...
कास्की । कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–९ मा कस्युङ खोलाले बगाएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान २४ वर्षीया दीपा गौतमलाई हरितालिका तीजको पञ्चमी...
काठमाडौं । सरकारले आइतबारसम्ममा कुल ६ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको कुल...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 3, 2021 0
सिंचाइ र कृषि जनशक्ति नहुँदा बागलुङमा १४ हजार हेक्टर जमिन बाँझो
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - June 30, 2020 0
बागलुङ । बागलुङमा कुल खेती योग्य जमिन मध्ये १४ हजार ६ ५५ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । जिल्लाको एक लाख ८२ हजार ७...
प्रकाश सपुत ‘परदेशी–२’ मा नायक
कला राजधानी समाचारदाता - February 21, 2020 0
काठमाडौं । बोल माया …बोलको गीत गाएर चर्चामा आएका गायक प्रकाश सपुत अब नायकको भुमिकामा देखिने भएका छन् । विभिन्न म्युजिक भिडियोमा नायकको भुमिका निर्वाह...
डब्ल्युएचओको अध्यक्षमा अब भारतका स्वास्थ्य मन्त्री
विदेश राजधानी समाचारदाता - May 20, 2020 0
नयाँ दिल्ली । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) को केन्द्रीय अध्यक्ष यस पटक भारतले पाउने भएको छ । भारतका स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धनले २२ मईदेखि...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - April 4, 2020 0
टोकियो । एसियाली राष्ट्र जापान चार महिनापछि विश्व खेलकुदको कुम्भमेला टोकियो ओलम्पिक २०२० को आयोजना गर्न तयार थियो । भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तयारी...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सद्वारा २५ लाख राहत घाेषणा
अर्थ राजधानी समाचारदाता - May 6, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले २५ लाखको राहत घोषणा गरेको छ । सरकारले स्थापना...
प्रदेश ७ राजधानी समाचारदाता - October 21, 2020 0
अख्तियार प्रमुखमा प्रेमकुमार राई सिफारिस
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - December 20, 2020 0
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । परिषद्को गत मङ्सिर ३० र आजको बैठकले रिक्त विभिन्न...
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - February 17, 2020 0
लमजुङ । लमजुङमा एक वडाध्यक्षको दस्तखत कीर्ते गर्ने चार जनालाई जिल्ला आदालतले जनही एक वर्ष कैद, १८ हजार जरिवाना गरेको छ । जग्गा किन्ने,...
भाेज खाँदा खाँदै बेहुला पक्राउ
ईश्वर विश्वकर्मा ‘क्षितिज’ - May 15, 2021